खै ‘माओवादी’ ? खोलाले बगायो, खै ‘फोरम’ ? सुक्यो – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on खै ‘माओवादी’ ? खोलाले बगायो, खै ‘फोरम’ ? सुक्यो
Man being scolded by his shadow 867876
कति नै भएको छ र यी दुवै दल अस्तित्वमा आएको ! सशस्त्र द्वन्द्व शुरु गरेको २०५१ बाट गणना गर्ने हो भने ‘माओवादी’ नाम आम नागरिकको मस्तिष्कमा आश र त्रास बनेर जमेको २५ वर्ष त भयो ! अनि अन्तरिम संविधान जलाएर चर्चामा आएको मिति ०६३ माघ २ बाट उमेर गणना गर्ने हो भने ‘फोरम’ सुनिएको १३ वर्ष त भयो ! राजनीतिक दलका लागि यो उमेर कच्चै हो तर कच्चैमा गणतन्त्र र संघीय राज्य बनाउन योगदान दिएका ‘माओवादी’ र ‘फोरम’ जादुगरले मञ्चमा चुट्की बजाएर बक्साबाट खरायो गायब बनाएझैँ गायब भए ।
सम्झौँ त त्यो समय ! ‘माओवादी’को नाममा जे आह्वान भयो त्यही भइहाल्थ्यो । नेपाल खुल्ला भने खुल्ला, बन्द भने बन्द । केन्द्रमा फोरमको मसल्स त्यत्ति जमेन तर तराईमा उसको रजगजै बेग्लै । केन्द्रीय दलका नेतालाई ठिंगुर्याउने क्षमता थियो ‘फोरम’मा । देशभित्रै राँको बाल्नु त सामान्य भई नै गयो । राष्ट्रिय सीमाको कुरै छाडौँ, उसले त अन्तर्राष्ट्रिय सीमासमेत बन्द गराउने ल्याकत राख्थ्यो ।
‘फोरम’ फोरिने क्रममा समेत यो शब्दको क्रेज गजबको थियो । जो–जो नेता उछिट्टिए पनि ‘फोरम’को मोह छाड्न सकेनन् र टाउको या पुच्छरमा झुड्याई नै राखे । फोरम फोरेर हिँडेका विजयकुमार गच्छदारले लोकतान्त्रिक पुच्छर राखेर नाम जुराए, मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) । जेपी गुप्ताले जुराए मधेसी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) । अर्को समूह फुट्यो र बन्यो मधेसी जनअधिकार फोरम (मधेस) । मधेस तराई फोरम भन्ने दल पनि बनेको थियो क्यार !‘फोरम’ बद्लिँदा बद्लिँदा कोही कांग्रेसतिर मिलेर विलिन भए, कोही तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी हुँदै राष्ट्रिय जनता दलमा रुपान्तरण भए ।
संविधान जारी भएसँगै पुरानै घर कांग्रेसमा गच्छदार फर्किदा फोरम शब्द सुकाएर गए । भ्रष्टाचार मुद्दा प्रमाणित भएसँगै जेपीको फोरम हरायो । अन्य दल तात्कालीन तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी हुँदै राष्ट्रिय जनता पार्टीमा परिर्वतन भए । अन्तिमसम्म मधेसी जनअधिकार फोरमका संस्थापक उपेन्द्र यादवले ‘संघीय समाजवादी फोरम’कै रुपमा भए पनि जोगाएका थिए ‘फोरम’ । नयाँ शक्ति पार्टीसँगको एकतापछि ‘फोरम’ पनि सुक्यो ।
तर हैन रहेछ । ‘माओवादी’ शब्दमा शक्ति नभएर नेतामा हुन्थ्यो भने सशस्त्र द्वन्द्व हाँकेका नेताहरु अहिले पनि सत्ता र शक्तिमा हुँदाहुँदै सम्पन्न हुन बाँकी शान्ति प्रक्रियाका महत्वपूर्ण सम्झौताका अक्षर किन धमिलियो ?
‘फोरम’ सुके पनि मधेसका नागरिकलाई राजनीतिक रुपमा शक्तिसम्पन्न बनाउन कस्सिएका नेता सत्ता र शक्तिमै रहँदारहँदै मधेसको राजनीतिक अधिकारबारे राज्यसँग भएका दर्जनौं सम्झौता किन अलपत्र परे ? मृत शब्द भए त हो ! तर परिर्वतनको बाहक बनेका शब्दको शक्ति बेजोडको हुने रहेछ । नेताभन्दा पावरफुल । नेता भन्दा बलियो । केपी ढुंगाना सुक्रबार साप्ताहिक बाट।
← फेसबुक चलाउँदै हुनुहुन्छ ? बुँदा नं ९४ ख्याल गर्नोस् ! → ठूलो संख्यामा विज्ञापन गर्ने तयारीमा लोकसेवा